हामी नेपाली हरेक कुरामा किन नकारात्मक बन्दैछौ ? किन नकारात्मक कुरामा मात्र समय ख़र्च गर्दैछौ ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
हामी नेपाली हरेक कुरामा किन नकारात्मक बन्दैछौ ? किन नकारात्मक कुरामा मात्र समय ख़र्च गर्दैछौ ?
लेखक : सन्तोष चोखाल / प्रवास पत्रकार ( जापान)
– यतिवेला यो मेरो लेख अध्ययन गरिरहनु भयका सम्पूर्ण नेपाली दाज़ुभाई दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार । आज केहि न केहि लेखौ लेखौ लाग्यो । यता हेरौ नकारात्मक टिप्पणी , उता हेरौ नकारात्मक टिप्पणी । हामीमा सकारात्मक भन्ने अलिकती पनि छैन हो ?म एक जिम्वेवार नागरिकको हैसियतले ठण्डा भै सोच्दै छु । तपाईंहरु पनि सोच्नुस त ? हामी हरेक कुराको विरोध मात्र किन गर्दैछौ होला है ? संसार आज नया-नया खोज ,आविष्कारमा व्यस्त छ तर हामी नेपाली आफनै नेपालीको विरोध गर्न , उसको कुरा काटन , उसको खुट्टा तान्न व्यस्त छौ । हामीलाई अरुभन्दा कम हुनु छदैछैन । म ‘उ’ भन्दा के कम । विरोधका स्वरले मात्रै परिवर्तन , विकास सम्भव छ र ? यतिवेला यो लेख पढ़दै गरेको हजुर कोहि-कसैले यही लेखको विरोध गरिरहनु भयको छ होला ।
हुन त विरोध र नकारात्मक कुरा भन्ने हाम्रा साथीभन्दा प्यारा छन । सामाजिक संजाल खोलेर हेर्नुस प्रत्यकको प्रत्यकले विरोध गरिरहेको छ । कोहिभन्दा कोहि कम नै छैन । उसले एउटा पार्टीको विरोध गरिरहेको छ , कोहिले त्यो जातको विरोध गरिरहेको छ । कोहिले कसैक़ो कामको विरोध गरिरहेको छ । गाउघरतीर चियापसल , चोक ग़ल्लीतीर पल्लाघरे रामेको , ओल्ला घरे श्यामको कुरा काटीरहेका छन । त्यो पाजी रामे त्यसले के गरिरहेको छ र , मैले पनि गर्न सक्छु त्यो काम त । फेरि उता श्यामेको कुरा हुन्छ – त्यो श्यामेको छोरा छ नी ड़ल्ले अमेरिकामा छ रे , त्यही भयर श्यामे ठाटियर हिडने गर्छ ।
यता एउटा हाकीमले अर्कों हाकिमको कुरा काटीरहेको छ – त्यो जाबोले भन्दा त मैले कती गर्न सक्छु – कती । त्यसले त दुई नम्बरि गर्छ रे नी , त्यसलाई अब फसाऊनुपर्छ । दुई नम्बरि नभय नी मेरो व्यापारलाई त घाटा परेको छ नी , त्यसको व्यापार चौपट बनाऊँछु । यता सामाजिक संजालमा फेरि अर्क़ै चर्चा छ – फलानो पार्टीले यसो ग़र्यो – ढ़िस्कानो पार्टीले त्यो ग़र्यो ।
अर्काले कमेण्ट गर्छ – तेरो पार्टीभन्दा मेरो पार्टी राम्रो । तेरो पार्टी त चोर ,फटाहा र गुण्डागर्दीको पार्टी । यता अर्को विरोध सुरु हुन्छ च्यान्टेले त्यो विजनेस सुरु गरेछ , त्यसको विजनेस ड़ामाडोल बनाउनुपर्छ । यता फेरि अर्क़ै कुरो छ – त्यसलाई भेंटे भने म सिध्याईदिन्छु होला , साला त्यसले यस्तो गर्ने , त्यस्तो गर्ने । हामीलाई नसोधि खुव काम गर्ने भाकोछ ।
आजकल त्यसले ख़ूब ख़र्च गर्छ रे , त्यसलाई त फसाऊनुपर्छ । हामी हामी बिचमै नकारात्मक कुराले राम्रैसंग जरो गाडेको छ – हामी कोहि कसैलाई कोहि स्वीकार्य नै छैन । हामी खोजमा लड़िरहेका छैनौ – रूपान्तरणमा लड़िरहेका छैनौ – अनुसन्धानमा लड़िरहेका छैनौ , लडेका छौ त केवल , अरुको ड़ाहामा लड़ेका छौ , जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई हौसला ऊर्जा दिने त कहाँ हो कहाँ हो – उसलाई तेरो यो ठीक भयन , त्यो ठीक भयन ।
यो राम्रो छैन – त्यो राम्रो छैन । अनी बिचरा त्यो व्यक्ति जसले समाजमा फरक , नया काम गरिरहेको छ – उसको त्यो विश्वास सप्पै गुमाउने बनाईंदिन्छौ अनी बिचरा – कागले कान लगे जस्तो भ्रम पर्छ अनी उसले कान छाम्दैन उ पनि बाध्य भयर कागकै पछी लाग़्छ । हामी आफु-आफुमा घमण्ड चलिरहेछ । हामी आफु-आफुमा रिस उठीरहेछ । यो संसारमा कसैले कसैलाइ सम्मान गर्नेवाला नै छैन , कसैलाइ गन्ने वाला नै छैन ।
यो त त्यो पार्टीको रैछ नी – यसलाई पनि सिध्याइदिउ । हामी विदेशको आकाश – पाटालमा पुग्छौ , सप्पै कुरा परिवर्तन गर्छौ – हाम्रो नीच सोच , नकारात्मक कुरा , कहिल्यै परिवर्तन गर्नै सक्दैनौ किनकी त्यो मेरो नेपाली पहिचान हो । संसारमा राम्रो गरेका पनि धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ – खोई उहाँहरू परिवर्तन हुनु भयो क्यारे , उहाँहरू पनि नेपाली हो । विदेशमा ४०/५० लाख नेपाली छरिएर बसेका छौ तर सामाजिक संजालमा नकारात्मक कुरा मात्र गरिरहन्छौ । हाम्रो देश नेपालको अस्तित्व नै हराओस तर हामी सबैले आ-आफ्नो नकारात्मक कुराको डंफु फुक्न छोड़दैनौ ।
ए बाबा , सत्यको पछाड़ी त लाग्नुस न छोड़नुस तपाईको नकारात्मक कुरालाई । हामी विदेश बस्नेलेबरु नेपालमा के-कसरी नया प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ , के -कसरी देशको विकास गर्न सकिन्छ । विदेशमा आयर यति धेरै कुरा सिकेका हामीहरू दुर्गम गाऊँको कुनामा बस्ने ती दाज़ुभाईं भन्दा नीच छौ हामीहरू । बरु ऊनीहरूमा सत्य या असत्य / राम्रो या नराम्रो छुटयाउने क्षमता त होला । तरमा हामीमा सदबुद्दी आउछ कहिले ? कोहि नेपाली संसारका विभिन्न धनी व्यक्तिहरूमा , शक्तिशाली व्यक्तिहरूमा गनीनुहुन्छ । तर हामी अधिकांश नेपालीलाई अरुको विरोध गर्न , अरुको नराम्रो टिकाटिप्पणी गर्न , अरुको विरोध गर्न बाहेक अरु आउदै आउदैन हो ? हामीलाई अरुको खेदो खन्न बाहेक आउदैन हो ? तपाईंहरु पनि सोच्नुस त ? देशमा व्यबस्था बदलियो तर अवस्था बद्लिएन । हामिलाई कसैको नजिकको बनिदिनु पर्ने ।
– एकले अर्कोंलाई दोषी देखाइरहेछ , एकले अर्कोंलाई आरोप लगाईरहेछ । आफ्नो ग़ल्ती स्वीकार्र्नै चाहान्न । ज़्यान जाओस तर म तल हुनै चाहान्न । हो आज देश पछी पर्नु , विकास नहुनुको मुख्य कारण पनि यही हो । हामी सत्यको पछी लाग्नै सक्दैनौ । यहाँ भाई-भाई बीच अझै पनि दोन्ड़ भैरहेको छ । नेपाली-नेपाली बिच मै मेल छैन भने हामी अरुसंग कसरी मिल्छौ होला र ? हरेक कुरालाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बूझ्नुस न – सामाजिक संजालमा यस्ता कुरा गरौ न – कसरी व्यवसायमा सफलता पाऊँन सकियला , कसरी राम्रोसंग अध्ययनशील बन्न सकियला , कसरी नेपालमा पर्यटकहरूको संख्या बढ़ाउन सकीयला । कसरी देशमा छिटो विकास होला ।
जिन्दगीको यात्रा त्यती लामो छैन – जीवनभर राम्रो गर्नुस न , राम्रो सोच्नुस न , अरुलाइ प्रेम गर्नुस न , माया गर्नुस न । हामी प्रवासमा आयर पनि केहि पनि परिवर्तन हून सकेनौ – हामी सबैले अरुलाई विरोध नै गर्नु पर्ने । अझ भनौ भने सामाजिक संजालमा यति नकारात्मक कुरा आउछन नी कुरै छोडौ । हामी एक नेपालीले राम्रो गरेको अर्कों नेपालीले देख्नै नहुने । उसलाई कसरि लडाउ , कसरी उसलाई ढलाउ भन्ने विचार मात्र हामीमा आऊने । यसरी कहिले हामी सभ्य हुन्छौ होला। विकासको चरम बिन्दुमा पूगेको देशबाट पनि हामीले केहि सिक्ने ?अलीकता अनुशासन सिक्ने कुरामा त हामी पछी छौ भने अरु के नै सिक्ने र । कामभन्दा नी हामीलाई गफ बढ़ी आउछ । हामी गफ गरेरै विकास गर्छौ तर काम गरेर होईन । यो समाज यस्तो बनीसक़्यो ।
जो समाजका लागी केहि परिवर्तन गर्छु भनेर आउछ , जो समाजको लागी रातदिन नभनी लागीरहेको हुन्छ उसैलाई समाजबाट तिरस्कृत गरिन्छ । यही हो हामीले प्रवासबाट सिकेको ? समाजसेवाको नाममा ख़ूबै मै जान्ने , मै बुझ्ने भन्दै बर्मलूट मच्चाइन्छ । कामको नाममा सिन्को पनि भाचिन्न , यही हो हामीले सिकेको ? थोरै भय पनि हामीहरु सकारात्मक बनौ । नकारात्मक कुराहरू कम गरौ , सकारात्मक सूचना , सकारात्मक – सफल कामलाई साथ दिऔ । धन्यवाद ।।
– सरल सहयात्री प्रिय रबीजी, यसर्थ धन्यवाद दिन चाहन्छु कि, तपाईंले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्याग
कल्पनाले लेखिन् पिडित पुरुषका कुरा: महिला बनेरै सरकारलाई सोधिन् ‘खै पुरुषको अधिकार ?’
कल्पना खरेल- नेपाललाई पुरुष प्रधान मुलुकको ट्याट लागेको छ । विश्वभर लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६
प्रहरीमाथी स्थानियले किन गरे आक्रमण, जनप्रतिनिधिपनि प्रर्दशनमा
दाङमा गढावा गाँउपालिवका वडा नं. ६ स्थित ईलाका प्रहरी कार्यालयमा गढवामा प्रहरी र स्थानीयबासीका बीचमा
राजनीतिक आवरणका पत्रकारहरु रबिको ढाड जतिबेला पनि भाँच्नु सक्छन्
बाध्यतावश अवसर र रोजगारीको लागि विदेशिएको एउटा नेपाली म विदेशको सवै सेवा सुविधा र पहिचान